कलरप्लान पेपर समीक्षा - Print Peppermint
कलरप्लान पेपर समीक्षा
सेप्टेम्बर 23, 2019 | कागज, प्रिन्ट डिजाइन
यहाँ मा Print Peppermint, हामी खरीद गर्छौं र एक टन कागज बेच्छौं ... 🙁 माफ गर्नुहोस्!
र हामी यस नयाँ कागज श्रृंखलाबाट वास्तवमै उत्साहित छौं सेना कागज भनिन्छ "कलरप्लान".
कागजातको यस परिवारले समावेश गर्दछ:
Met० सावधानीपूर्वक क्युरेट पेपर रंगहरू
२ text टेक्स्ड एम्बोसिंगहरू
तलको भिडियोमा हेर्नुहोस्, अस्टिनले विच्छेद गरे जस्तै उपयोगी लाइटबक्स वर्तमानमा कस्टम एम्बोसिंगहरूको ings मा नजिक हेर्नुहोस्।
हे, साथीहरु, अस्टिन यहाँ बाट printpeppermint.com। र आज, म तपाईंसँग कुरा गर्न चाहन्छु कागज। मा Print Peppermint, हामी धेरै कागज किन्छौं र बेच्छौं। दुर्भाग्यवस, माफ गर्नुहोस् रूखहरू, यो यस्तै छ, तर हामी अधिक प्रयोग गर्छौं रिसायकल कागज सकेसम्म र हामी रासायनिक मुक्त सोया-आधारित मसी र ती सबै अन्य राम्रा सामानहरू प्रयोग गर्दछौं। त्यसैले आज, कागजको यस परिवारलाई म हेर्न चाहन्छु कलरप्लान भनिन्छ।
कलरप्लान लिजियन पेपर द्वारा निर्मित हो। यो वेबसाइट मा यहाँ भन्छ, तिनीहरू व्यापार मा भएको 25 वर्ष। र म तिनीहरूको उत्पादनहरूको गुणवत्ता प्रमाणित गर्न सक्छु। हामी उनीहरूको धेरै कागजहरू प्रयोग गर्दछौं, त्यसैले नियमित आधारमा। त्यसोभए आउनुहोस् हामी भित्र छिराऔं। के कलरप्लान रोचक बनाउँछ? खैर, नामले भनेजस्तै र color्ग
त्यहाँ छनौट गर्नका लागि colors० र .्गहरू छन्, र ती क्रमबद्धित सुन्दर चमकदार ढ c्गले यी रंगहरू। मैले भन्नु पर्छ, तिनीहरूका वेबसाइट सुपर चालाक छ। तिनीहरूसँग वर्गीकृत, क्लासिक, नयाँ, कर्पोरेट, प्रकाशदेखि अँध्यारो छ। तपाईं एक व्यक्ति र color छनौट गर्न सक्नुहुनेछ र यो के हो हेर्न सक्नुहुन्छ पूरक रंगहरू जस्तो देखिनुहोस्, नजिकको रंगहरू कस्तो देखिन्छन्।
हाम्रो नमूना प्याक: https://www.printpeppermint.com/samples/
यदि तपाईंसँग हाम्रो नमूना प्याकहरू छन् भने तपाईंले वास्तवमा देख्नुभयो कि त्यहाँ एक ट्रिपलक्स कार्ड छ जहाँ हामीले यी तीन कागजातहरू एकसाथ मर्भ गर्यौं, ल्याभेन्डर, फुचिया गुलाबी र क्यान्डी। यो हो Peppermint कपकेक्स कार्ड। यो धेरै राम्रो छ। त्यसोभए तपाईं वेबसाइटको पृष्ठभूमि पनि र the्ग मध्ये एक बनाउन सक्नुहुन्छ, जसले तपाईंलाई विशाल सतह क्षेत्र कस्तो देखिन्छ देख्न दिन्छ। तर धेरै जसो डिजाइनरहरू जान्दछन् कि यो एउटा वेबसाइट हो, हामी कम्प्युटर स्क्रिनमा हेरिरहेका छौं जुन एक उज्यालो स्रोत हो।
त्यसैले जब तपाईं पाउनुहुन्छ भौतिक कागज नमूना तपाईको हातमा, तिनीहरू कम्प्युटरमा कस्तो देखिन्छन् भन्दा अलि फरक देखिदैछ यदि यो एक म्याकबुक रेटिना स्क्रीन प्रकारको कुरा हो भने पनि। त्यसोभए तिनीहरू colors० र colors्गको शीर्षमा पनि प्रस्ताव गर्छन्, जसलाई उनीहरूले एम्बोजि call्गहरू कल गर्छन्, र त्यहाँ २ 50 वटा छन्। यी बिभिन्न बनावटहरू जस्तै हुन् जुन तपाईं कागजमा स्ट्याम्प गर्न सक्नुहुन्छ वा तिनीहरूले तपाईंलाई ढुवानी गर्नु अघि उनीहरूले यसलाई मोहर लगाउँनेछन्।
र तपाईं उनीहरूमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र त्योको एक उच्च रिजोलुसन छवि संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस् र यसलाई भित्र तान्न सक्नुहुन्छ Photoshop र यसको साथ वरिपरि खेल्नुहोस्। यसमा अस्पष्टता तह राख्नुहोस् र तपाईंको डिजाइनमा यो कस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस्। र तिनीहरू देखाउँछन् कि प्रत्येक एम्बोसिंग केहि सेता पानामा र कालो पानामा कस्तो देखिन्छ, र मलाई लाग्छ कि यो अति सुस्त र साँच्चै राम्रो छ। त्यसको शीर्षमा, तिनीहरू पनि आठ अलग पेपरवेटहरू प्रस्ताव गर्दछ।
त्यसोभए तपाईले 50० र ,्ग, २ emb एम्बेसिंगहरू, र अब paper पेपरवेटहरू बिच सम्मिश्रणको समूह भेट्टाउनुभयो। तिनीहरूसँग भएको सबै कुरा १०० जीएसएम,-25-पाउन्ड पाठबाट छ, जुन तपाईंको सस्तो घर कपीयर प्रतिलिपि प्रकार कागज जस्तै छ, all०० जीएसएम सम्म, -२-पोइन्ट इम्पीरियल, जुन डबल मोटी सुपर राम्रो व्यापार कार्ड जस्तो हुनुपर्दछ। ।
यसैले मैले आज यहाँ मेरो स्टुडियोमा बर्लिनको तहखानेमा मेरो हातको लाइटबक्स पाएँ। त्यसोभए यस भित्र छिर्नुहोस्, यी एम्बोसिंगहरू वास्तवमै कस्तो देखिन्छन् र कस्तो रंगहरू छन्, नजिकबाट हेर्नुहोस्। ठीक छ।
त्यसैले म मूल रूपमा सबै २ 25 गर्दैछु, तर त्यसपछि मैले महसुस गरे, त्यो मेगा-लामो भिडियो जस्तो हुनेछ। त्यसैले हामी केवल आजका लागि मेरो शीर्ष पाँच गर्ने छौं। सूचीमा पहिलो अपलाई रिज्ड भनिन्छ, र यो यस्तो देखिन्छ।
योसँग धेरै विस्तृत खण्डहरू छन् र बीचमा साना लाइनहरू छन्। यो एक ठूलो समान Led जस्तै छ यदि तपाईंले कहिले देख्नु भएको छ, तर यो एक धेरै बढी स्पष्ट छ, धेरै व्यापक क्रमबद्ध गरिएको भागहरूमा।
यो एक धेरै राम्रो कागज हो र कानूनी ग्राहक वा धेरै पुरानो-परम्परागत भावनाको खोजीमा बढी रूढिवादी-प्रकारको व्यवसायसँग राम्रोसँग काम गर्दछ। हाम्रो सूचीमा अर्को माथि Sandgrain भनिन्छ, र यो केही अलि देखिन्छ।
यसमा निश्चित रूपमा स्यान्डपेपरको एक प्रदर्शन हुन्छ र यसको बनावटको केहि अलि बढी हुन्छ जब तपाई यसमा आफ्नो औंलाहरू चलाउनुहुन्छ, कुनै कफ स्यान्डपेपर जस्तो होइन जुन तपाईलाई स्क्र्याच गर्दैछ, तर पुरानो जस्तो कि एक लाख पटक प्रयोग गरिएको छ, त्यसैले क्रमबद्ध गर्नुहोस् मा smoothed मा। साथै, माइक्रोस्कोप मुनि भाइरस जस्तो देखिन्छ।
त्यसोभए हाम्रो सूचिमा अर्को एकलाई सिल्कविभ भनिन्छ, र यो यस्तो देखिन्छ।
पहिलो उपस्थितिमा, यो लगभग लिनेन जस्तो देखिन्छ, तर म व्यक्तिहरूको रूपमा भन्ने छु, यो क्रसचेच बान्कीको एक कडा क्रमबद्ध छ। यसले निश्चित रूपमा मलाई फेब्रिकको धेरै राम्रोसँग सम्झाउछ, एकदम सानो विस्तृत प्रकारको स्टिचि,, र मँ यो मान्दछु जहाँबाट नामको प्रेरणा आएको हो।
म लिजियन पेपरमा काम गर्दिन, त्यसैले मलाई कुनै विचार छैन। जे भए पनि, यो एक शानदार एम्बोसिंग हो र विभिन्न रचनात्मक प्रिन्ट प्रोजेक्टहरूमा राम्रोसँग कार्य गर्दछ। हाम्रो सूची मा अर्को embossing दमास्क भनिन्छ, dumbass हो।
यो पुरानो संसारको प्रकारको कपडा, रेशम कडा कपडा हो, र यस्तो देखिन्छ।
यो प्राप्त भयो गोलाकार घुम्ने प्रकार लाइनहरू को कि यो धेरै राम्रो मलाई मानव फिंगरप्रिन्ट को धेरै सम्झाउन। मलाई लाग्छ कि यो एक कपडाको ढाँचा हो जुन २०० भन्दा पहिले धेरै लोकप्रिय थियो। जे भए पनि, यो एक धेरै राम्रो देखिने बनावट हो र विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा भव्यताको स्तर ल्याउन सक्छ।
हाम्रो सूची मा अर्को embossing पेबल भनिन्छ, र यो यो केहि अलि देखिन्छ।
म विश्वास गर्दछु कि यो नाम ढु inspired्गाबाट प्रेरित देखिने प्रकारबाट आएको हो, र यदि तपाई वास्तवमै यसमा ध्यान दिनुहुन्छ भने, यो यस्तो प्रकारको हो, पालिस स्यान्डस्टोन टाइल प्रकारको देखिन्छ कि तपाई आफ्नो पदयात्रा लाई तपाईको अगाडिको ढोकामा लान सक्नुहुन्छ, र यो निश्चित रूप मा यो एक प्रकारको जैविक भावना छ, एक कृत्रिम देखो बनावट मा सबै छैन।
र मलाई लाग्छ कि यो वास्तवमै यो एम्बोसिंगको अपील हो कि यसले विश्वको एक धेरै नै जैविक प्रकारको अनुभूति दिन्छ यदि यदि तपाइँ यो कागज प्रयोग गर्नुहुन्छ र तपाइँको परियोजनामा ​​एम्बसिंग गर्दै हुनुहुन्छ भने। ठिक छ, साथीहरू, यो आजको लागि हो। हेरीदिनु भएकोमा धन्यवाद। मलाई आशा छ कि तपाईंले केहि सिक्नुभयो मैले २ 25 एम्बेसिंगहरू र सबै र colors्गहरू र मोटाईहरू र सबै चीजहरू मार्फत जान लाग्ने समयलाई पूर्णतया कम महत्त्व दिएँ।
त्यसोभए यदि तपाईंले आज यहाँ जे हेर्नुभएको थियो रमाईलो गर्नुभयो भने, मलाई टिप्पणीहरूमा मलाई थाहा दिनुहोस्, र म निश्चित रूपमा एउटा भाग २ र भाग तीन बनाउन समय लिन्छु, जहाँ हामी केही अन्य एम्बोसिंगहरू र अन्य रंगहरू मार्फत जान सक्छौं र मोटाईहरू तुलना गर्न सक्छौं। कागज को। फेरी हेर्नु भएकोमा धन्यवाद, र हामी तपाईंलाई अर्को चोटि देख्नेछौं।
← व्यापार कार्ड ब्रेक डाउन - फेलिज अंदरूनी
Macallan सँगको सहकार्यमा "द म्याकलन संस्करण पर्पल" अनावरण गरियो Pantone रंग संस्थान →